Izindlela zokwandisa ukubonakala xa uhamba ngeekhamera
Indlela yokukhulisa ukubonakala: Hlala ngaphandle kweeNdawo eziPhuphukileyo uze wenze i-Bamp Safety
Zibeke ngokwakho kwisithuthi. Ifoto © Justin Sullivan / Getty Izithombe
"Andizange ndimbone umgibeli" enye yezona zinto ziqhelekileyo eziqhubi zezimoto zithi emva kokubetha umqhubi wee-motorcyclist, ukubonakalisa ngento embi ukuba kulula kangakanani kubagibeli ukuba baphonse phantsi kwe-radar. Nazi izicwangciso malunga nokuhlala ubonakala ngexesha uhamba.
Indlela yokuqala kunye neyona ndlela ecacileyo yokuphepha ukutshatyalaliswa kukuhlala ngaphandle kweempawu eziyimfama zezinye izithuthi kwaye uzenzele indawo eyaneleyo yokusabela. Izindlela zokwenza oku ziquka:
Ukuqinisekisa ukuba ubona abaqhubi beemoto ezikufutshane nawe; ukuba ungazibona (ngokubambisana kwamehlo okanye kwizibuko zabo), amathuba okuba umgca wabo wembonakalo ... kodwa ungacingi nantoni na.
Ukudala ibhokisi yokukhusela ecaleni kwakho, oku kuthetha ukushiya umgama owaneleyo phambi kwakho, kwaye uzenzele indawo ukuze uhambise ingxaki.
Gwema ukuhlala kwiindawo eziyimfama ezidalwe yi-A-itsika kunye neentsika ze-C; ezo ziphambi kwe-3/4 nangemuva ye-3/4 yokujonga ngaphandle kwesihlalo somqhubi. Ukupasa kunokuba yingozi, ngoko ke uqaphele xa ufumana imoto okanye omnye umgibeli.
Ukuba ugibele neqela , qiniseka ukuba ushiye umgama okhuselekileyo kuwe, kwaye ugibele kwisakhiwo esineenkqubela ukubonakala okukhulu.
Idibeneyo: Yiyiphi Imithetho Yakho Yokuhamba?
Gwema ukugibela ibhasi elimnyama
Umbala omhlophe ubhalisa ngokufanelekileyo ngombono wembambano. Ifoto © Sloan Essman
Izithuthuthu zezimnyama zibukeka zipholile, kodwa zivame ukuxubusha kwiindawo ezikuyo. Ukukhwela ibhayisiki ebalabala ngakumbi-nokuba ingaba mhlophe, iphuzi, okanye ibomvu-iya kukwandisa iingxaki oza kubhalisa kwimibono yezinye izithuthi.
Gqoka i-Bright okanye Gear Reflective Gear
Ezinye iibhatyi zesikhumba zingaphathwa ngononophelo. Ifoto © Vanson
Umgibeli ngumyinge omkhulu we-motorcycle's presence presence, kwaye ugqoke umbane oqhaqha okanye okhuselekileyo uyindlela elula yokuma.
Khetha umzila okhanyayo, kwaye uzama ukufumana iigebethi kunye neengqayi eziphathwe ngokugqiba. Esinye isambatho ngoku siza nesigqi esicacisayo esibonakala ebusuku kuphela, songeza inkalo yesitayela kwindawo yokuphepha.
Sebenzisa i-Tape Reflective
Itheyibhile ebonakalayo ingasetyenziswa naphi na. Ifoto © Halo Tape
Ukuba awunayo igesi ebonakalayo okanye ufuna ukufumana indlela engakumbi yokubonakala, uthenge iteksi ebonakalayo kwaye uyisebenzise nantoni na evela kwisikhwama sakho kwi-saddlebags zakho.
Sebenzisa iiMenu zakho
Izibonakaliso zandla zingaba yindlela ephumelelayo yokwandisa ukubonakala kwakho ... uphawu "Uxolo" lukhetho. Ifoto © David McNew / Abasebenzi / Getty Izithombe
Ukhumbule ezo zibonakaliso zandla ozifundileyo zokuhamba ngebhayisikili? Ukwandisa okanye ukuchukumisa ingalo yakho yindlela efanelekileyo yokuphakamisa iphrofayili yakho ebonakalayo ngaphezu kokusebenzisa izibonakaliso zakho zokujika. Qiniseka ukuba unako ukulawula ngokufanelekileyo isithuthi sakho ngelixa uyenza njalo, kwaye ungalokothi uthathe izandla zakho kwi-handlebars xa ujikelezo luqhubeka.
Thepha iiBrakes zakho
Umbhobho okhanyayo weebhuleki unokukunceda ufumane umsila emsila wakho. Ifoto © Basem Wasef
Ukuba ulandelwa ngokusondeleyo yimoto kwaye akakwazi ukugcina ukhuseleko olukhuselekileyo olukujikelezayo, akukho nto iphosakeleyo ngokuthintela ngokukhawuleza iibhuleki zakho ukuze usebenze izibane zokutshaya. Ukuba loo nto ayincedisi ukusila, yenza okusemandleni akho ukuphuma ngokukhuselekileyo kwindlela kwaye ufumane indawo ekhuselekileyo yokukhwela.
Sebenzisa iMigodi yakho ePhakamileyo xa ikhuselekile
Imigangatho ephakamileyo iya kwandisa ukubonakala kwangaphambili; Qiniseka ukuba usebenzise kuphela xa kukhuselekile. Ifoto © Brian J. Nelson
Iikhuphethi zilungiselelwe ukuqhuba izibane zaso zonke izihlandlo, kodwa ukuba awukho engozini yokuphofisa izithuthi eziza kuhamba, ukukhupha iiplanga zakho eziphezulu kuzokwengeza inqanaba elongezelelweyo lokubonakala.
Ukuba unombane ophezulu wokukhupha iibhubhu okanye ujoliswe ngokukhawuleza kwizithuthi ngexesha lokugibela ebusuku, gwema ukusebenzisa iiplanga zakho eziphezulu ngokungenasidingo.
Sebenzisa uModyuli weNtloko
Izibane zentloko ziyakwandisa ukubonakala. Ifoto © Basem Wasef
Iimodyuli eziphambili zixhobo zecomputer ezenza izibane zitshintshe okanye zitshise, nangona ziyaziwa ukuba zithukuthele abagibeli kunye nabaqhubi, ziyakwazi ukuphucula ukubonakala.
Iimodyuli zisemthethweni kuma-50 xa zithe zithobela iinkcukacha ezithile; leli phepha liprintela luchaza umthetho waseburhulumenteni kwiimodyuli ezihamba phambili.
Sebenzisa iiLamps zokuHlola
Izibane ezihambayo zenza kube lula kwezinye iinqwelo ukuba ziqikelele isivinini sakho. Ifoto © Brian J. Nelson
Izifundo zibonisile ukuba kulula ukuqikelela isantya sithuthi xa kukho izibane ezibini ezihlukeneyo, ekubeni ukuguqulwa kwemiba kunceda ngokuqonda ngokujulile.
Ukusebenzisa okanye ukufaka izibane ezihambayo akugcini nje ukwenza ibhayisikili yakho ibonakale ngakumbi, inceda ukuza kwezithuthi kuqikelele isivinini sakho, kunokusindisa ekuphumeni okungaphephile.
Sebenzisa iPhondo lakho xa kuyimfuneko
Ukusebenzisa uphondo lwakho kuyindlela ecacileyo kodwa efanelekileyo yokwenza ubukho bakho bukwazi. Ifoto © Basem Wasef
Kukho umgca ococekileyo phakathi kokungcola kwengxolo nokuzimela, kodwa ukuba zonke izinto ezihlulekayo ungathanda ukuzenza ubuso bakho bazi ngokukhupha uphondo lwakho. Nangona i-stereos ephakamileyo yemoto okanye ezinye iziphazamiso zendawo zingakwazi ukuthintela abaqhubi ukuba baqaphele ukuvakala kwengxolo yakho, isigqibo sesibini sokuphambanisa inkinobho yophondo singenza umehluko phakathi kokuba lixhoba nokuphepha ingozi.
I-10 yezona ziDlala zeNgcono zeBhola kwiHlabathi
Iingcaphuso ezikhuthazayo malunga neMimangaliso
IShishini leShishini - iiNtengiso kunye nabaThengi